Tamarta Qaadashada Raadinta Ikhtiyaarka Casriga ah ee Cusub. La xiriir Tamarta Tamarta
Home > tamarta la cusboonaysiin karo
Waxaan kaa caawin karnaa inaad koronto u sameysid xalalka tamarta dib loo cusboonaysiin karo oo ay ka mid yihiin PV, biomass-boilers ama mashiinnada hawada ee kulaylka.
PV PV korontada jiilka ayaa helaya dawladda Diyaarinta Dakhliga (Fiiga) iyo dhalinta kuleylka dib u cusbooneysiinta waxay kuu ogolaaneysaa inaad hesho Dawladda Dhiirrigelinta kuleylka ee dib loo cusboonaysiin karo (RHI).
Solar PV iyo Thermal
Kaydinta Solar PV
Solar PV ama saqafka kuleylka ee saqafkaaga saqafkaaga wuxuu dhalin doonaa koronto kulul ama biyo kulul kulul gurigaaga.
Meelaha hawada ee hawada kuleylka leh
Mashiinnada hawada ee kuleylka hawada ka soo baxa waxay hawada ka soo baxdaa si ay u dhaliso kuleylka loo isticmaali karo kuleyliyaha ama kuleylka hawada.
Qalabka biomassers waxay isticmaalaan kareemada sidii shidaal waxayna ku badbaadin karaan 30% biilasha kuleyliyaha kulul iyo kuleylkaaga.